Salantsalany antonony sy salantsalany avo lenta, Shina salantsalany salantsalany sy salantsalany avo lenta mpanamboatra, mpamatsy, orinasa - HNAC Technology Co., Ltd
Salan'isa antonony sy avo lenta switchgears
Home>Mpanome vokatra>Fitaovam-pitaovana mekanika sy elektrika feno>Salan'isa antonony sy avo lenta switchgears
Ny fitaovana feno voltase avo lenta dia ampiasaina indrindra amin'ny fanaraha-maso sy fiarovana ny rafitra herinaratra (anisan'izany ny orinasa mpamokatra herinaratra, substations, tsipika fampitana sy fizarana, orinasa indostrialy sy fitrandrahana ary mpampiasa hafa). Ny ampahany amin'ny fitaovam-pamokarana herinaratra na tsipika dia azo apetraka ao anaty na tsy miasa araka ny filan'ny fampandehanana ny tambajotra, na azo ampiasaina rehefa tsy nahomby ny fitaovana na tsipika, ny ampahany diso dia nesorina haingana tao amin'ny tambajotra herinaratra, miantoka ny fampandehanana ara-dalàna ny ampahany tsy misy hadisoana amin'ny tambazotran-jiro ary ny fiarovana ny fitaovana sy ny mpiasa miasa ary ny fikojakojana.
Ny fitaovana feno voltase ambany dia ampiasaina betsaka amin'ny fitsinjarana herinaratra, fiara elektrônika ary fitaovana fanaraha-maso mandeha ho azy amin'ny rafitra ambany-voltage ao amin'ny orinasa mpamokatra herinaratra.
Ny vokatra andiany dia mampiasa ny fitambaran'ny fizarana ara-drafitra ho rafitra fototra. Ny singa ara-drafitra rehetra dia raikitra amin'ny screws. Rehefa avy namorona ny rafitra fototra, ny varavarana, baffle, clapboard, drawer, mounting bracket, busbar ary ny singa elektrika dia raikitra araka izay takiana mba hamoronana ny switchgear feno;
Ny rafitra dia mampiasa fizarana mihodinkodina. Napetraka amin'ny birao telo-dimensional, ary mifandray amin'ny bolt, tsy misy rafitra welding, mba hisorohana ny fikorontanan'ny lasantsy sy ny adin-tsaina ary ny fanatsarana ny fametrahana marina;
Ny rafitra anatiny rehetra dia galvanized, ny rafitra ivelany dia voafafy amin'ny vovoka epoxy static aorian'ny fikarakarana sy ny phosphating;
Ho an'ny fampiasana an-trano, ny haavon'ny fampiasana toerana ≤ 2000m (ambony io dia azo ifampiraharahana);
Ny hamandoana relatif dia tsy tokony hihoatra ny 50% amin'ny +40 ℃, raha amin'ny mari-pana ambany kokoa, ny hamandoana lehibe kokoa dia azo ekena, ohatra 90% amin'ny + 20 ℃. Raha jerena ny fiovan'ny mari-pana dia mety hahatonga ny condensation indraindray, ny salan'isa isan'andro dia tokony ho latsaky ny 95% ary ny salan'isa isam-bolana latsaky ny 90%.
Ny HZ3000 Computer Monitoring System (SCADA System)